के नोटबाट सर्छ कोरोना भाइरस ? यसो भन्छन् चिकित्सक – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/के नोटबाट सर्छ कोरोना भाइरस ? यसो भन्छन् चिकित्सक
कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दै जाँदा केही समयअघि चिनियाँ बैंकहरुले नोट धुनुका साथै तिनलाई संक्रमणरहित बनाएका थिए। तर नोटबाट भाइरस सर्न कति सम्भव छ त? जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीस्थित सेन्टर फर हेल्थ सेक्युरिटीका वरिष्ठ विद्वान डा. अमेश अदल्जा भने नोटबाट सर्ने भाइरसप्रति धेरै चिन्तित नहुन आग्रह गर्छन्। ‘यो श्वासप्रश्वाससम्बन्धी भाइरस हो। त्यसैले यो खोकी, हाच्छ्युँ र शरीरबाट निस्किने र्‍यालसिंगान, आदिबाट सर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो कुनै पनि चीजसको सतहमा टाँसिएर अर्को मानिसमा सर्न सक्छ।
तर, त्यो सर्ने मुख्य तरिका होइन।’ ‘खासगरी म चाहिँ नोट वा सिक्काबाट भाइरस फैलिने विषयमा धेरै चिन्ता लिन्नँ,’ उनले थपे। यद्यपि पैसा खेलाएपछि हात धुन उनले सुझाए। त्यस्तै नेपालको उत्तरी छिमेकी मुुलक चीनको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले अहिले पुरै विश्व जगतमा नै आतंक मच्चाइरहेको छ । यो भाइरसको संक्रमण १ सय २० देशमा पुगिसकेको छ । अहिले सम्म १ लाख १९ हजार ४ सय ५५ जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४ हजार ३ सय २ पुगेको छ । त्यस्तै संक्रमितमध्ये ६६ हजार ५ सय ९४ जना उपचारपछि घर फर्केका छन् ।कोरोना पछिल्लो समय खाडीमुलुकमा पनि महामारीका रुपमा फैलिन थालेको छ।
कोरोनाविरुद्धको रुसी खोपबारे डब्लुएचओलो जनायो सावधानी !
अस्पतालले जोडिदियो भारतमा ड्युटीमा बसेका प्रहरीको काटिएको हात